उदयपुरमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक जनाको मृत्यु , प्रहरी जवानसहित दुई जना घाइते | Online Nepal
उदयपुरमा प्रहरीले गोली चलाउँदा एक जनाको मृत्यु , प्रहरी जवानसहित दुई जना घाइते
उदयपुर । कांग्रेस कार्यकर्तासँग बिबाद हुँदा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कटारी नगरपालिका–१० सोरुङ्गछबिसेमा शुक्रबार एक युवकको मृत्यु भएको छ । झडपका क्रममा एक बालक र प्रहरी जवान घाइते भएका छन् ।
प्रहरीले चलाएको गोली छातीमा लागेर स्थानीय १९ वर्षीय नवीन कटुवालको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । मृतक कटुवाल नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट स्वतन्त्र उमेदवार बनेका गौरबहादुर कटुवालका भतिज रहेको खुलेको छ ।
खुट्टामा गोली लागेका अर्का १४ वर्षीय बालक मोहन श्रेष्ठ घाइते भएका छन । उनी घरमा बसिरहेका थिए । झडपमा टाउकोमा ढुंगाले लागेर प्रहरी जवान विष्णु तामाङ घाइते भएका छन् ।
मतदान प्रक्रिया सकेपछि दलका कार्यकर्ताबीच विवाद उत्पन्न भई प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गर्दा शान्तिसुरक्षाका लागि गोली चलाइएको प्रहरीको भनाइ छ । मतदान सकेर दलका प्रतिनिधिले मुचुल्कामा समेत हस्ताक्षर गर्दैगर्दा एक्कासी बाहिरबाट ढुगांमुढा हुन थालेपछि प्रहरीले जवाफी फायरिङ गरेको हो ।
प्रहरीले एसएलआरबाट ४ राउन्ड र थ्रीनटथ्री राइफलबाट ४ राउन्ड गरी जम्मा ८ राउण्ड गोली फायर गरेको जनाएको छ ।
मतपेटिका भने सुरक्षित रहेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत दीपक खनालले वताएका छन् । त्रियुगा नरपालिका–१२ पुरानो गाईघाट मावि मतदान केन्द्रमा वर्षाको कारण ढिलाइ भएर विवाद भए पछि मतदान पुन: गर्ने गरी रद्द गरिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले हिंसा मच्चाएको ओलीको आरोप, कब्जा भएका ठाउँमा पुनः मतदान गराउन ध्यानाकर्षण
६४ प्रतिशत मतदान सम्पन्न , ४४ मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगित
सर्लाहीमा मतदान अधिकृत नै पक्राउ
शान्तिपुर मतदान केन्द्रबाट प्रचण्ड र मेयर उम्मेदवार रेनुले गरे मतदान
देशभर मतदान सुरु : गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले गरे मतदान
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि बुधबारबाट विद्यालय ६ दिन बन्द हुने
नेपालमा रहस्यमय रूपमा बेपत्ता भएका पाकिस्तानी सेनाका पूर्व कर्णेल कहाँ छन् ? प्रहरीकै मौनता !
निर्वाचनको दिन संसद भवन अगाडि ‘सिलिन्डर बम’ राखेको आरोपमा चार जना पक्राउ
एमाले सांसद मोहन बानियाँका छोरा पेस्तोलसहित पक्राउ